Umaleko wokuvalwa kwetanki wase-China oMnye kunye noMthengisi | | Qiangzhong
Iyakwazi ukuvusa, ukudibanisa, ukudibanisa kunye nokwenza homogenize izinto. Yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu engatyiwa 304 kunye 316L. Ubume kunye noqwalaselo ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno zenkqubo yemveliso.
Esi sixhobo sihlangabezana neemfuno ze "GMP" yase China; Kwaye yenzelwe kwaye yenziwa ngokungqinelana nemigangatho ye-JB / 4735-1997 yase China. Esi sixhobo silungele ishishini elixuba amayeza, ishishini lokutya, ishishini lokwenziwa, kunye nokulungiswa kolwelo (imveliso) kunye neenkqubo ezahlukeneyo zokunyanga amanzi.
Izinto eziphathekayo zenziwe nge-316L okanye i-304 yentsimbi engenasici, umphezulu wangaphakathi upolishiwe, kwaye uburhabaxa (Ra) bungaphantsi kwe-0.4pm.
2.Indlela yokuxuba ibandakanya ukuxuba okuphezulu koomatshini kunye nokuxuba okungaphantsi:
Optional Iindidi zokuxuba eziphezulu zokuxuba ziquka: i-propeller, i-screw, i-anchor, i-scraping okanye i-paddle, enokuxuba ngokupheleleyo izinto ngokulinganayo.
Types Iindidi zokuxuba ezantsi ezinokukhetha zibandakanya: ishukumisi semagneti, ishukumisi eshukumisayo, kunye ne-homogenizer esezantsi esezantsi, esetyenziselwa ukukhawulezisa ukuchithwa kunye ne-emulsification yezixhobo.
Uhlobo lwesantya sokuxuba lunokulungiswa ngesantya okanye ngesantya esiguqukayo esilawulwa sisiguquli samaza, ukwenzela ukunqanda amagwebu amaninzi ngenxa yesantya esigqithisileyo.
Ikhabhathi yolawulo lwentsimbi engenasici engenanto inokubeka iliso ekusebenzeni kwezixhobo, kwaye inokubonisa idatha enje ngeqondo lobushushu kunye nesantya esivuselelayo.
Ukucwangciswa okukhethiweyo koku kulandelayo: izixhobo zokuphefumla umoya, ithemometha, izibuko lomphunga, igwebu yococeko, inqanaba lokulinganisa ulwelo kunye nenqanaba lolwelo inkqubo yolawulo oluzenzekelayo, ibhola ejikelezayo yokucoca i-CIP, njl.
Iindidi zeebhatyi 2.Optional zibandakanya ityhubhu ezibhijeleyo, ibhatyi epheleleyo, kunye nebhatyi yobusi.
Ukugquma kungabuboya begwala, i-polyurethane foam, okanye iperley yomqhaphu. Igobolondo iphosiweyo, ibrashi okanye i-matted, kukhetho lomthengi
Le tafile ingentla yeyokubhekisa kuphela, inokwenza ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
'Esi sixhobo singenza ngokwezifiso izinto zabathengi, kufuneka sihambisane nenkqubo, njengokuhlangabezana ne-viscosity ephezulu, umsebenzi ohambelana nokuqinisa, izinto ezinobushushu ezifana neemfuno. Itanki lokuxuba lenziwe ngumzimba wetanki wokuxuba, iziphelo eziphezulu nezisezantsi, i-agitator, iinyawo, izixhobo zokudlulisela, izixhobo zokutywina i-shaft, njl njl, kunye nezixhobo zokufudumeza okanye zokupholisa zinokongezwa xa kufuneka njalo.
Ngokweemfuno ezahlukeneyo zenkqubo, intsimbi engenasici okanye ikhabhoni yentsimbi inokusetyenziselwa itanki lomzimba, ikhava yetanki, i-agitator kunye ne-shaft seal.
Umzimba wetanki kunye nesigqubuthelo setanki sinokudityaniswa ngokutywinwa kwe-flange okanye nge-welding. Kunokuvulwa imingxunya eyahlukeneyo kumzimba wetanki nakwikhava yetanki ekondleni, ukukhupha, ukujonga, ukulinganisa ubushushu, umlinganiso woxinzelelo, ukwahlula umphunga, ukukhupha umoya ngokukhuselekileyo, njl.
Isixhobo sokuhambisa (imoto okanye isinciphisi) sifakwe kwisiciko setanki ukuqhuba i-agitator kwitanki yokuxuba.
Isixhobo sokutywina ishafti sinokukhetha kwitywina loomatshini, ukupakisha itywina kunye nelebyrinth seal. Ngokweemfuno ezahlukileyo, i-agitator inokuba luhlobo lwe-paddle, uhlobo lwe-anchor, uhlobo lwesakhelo, uhlobo lwe-screw, njl.Ukuba unazo naziphi na ezinye iimfuno zokwenza ulwenziwo, nceda qinisekisa nathi.
Nceda usebenze ngokungqongqo ngokungqinelana noxinzelelo olusebenzayo kunye nobushushu obusebenzayo obulungelelaniswe kwigama lemveliso ukukhusela ingozi.
Gcina izixhobo ngokungqongqo ngokungqinelana nemigaqo yokupholisa kunye neoyile kwincwadana yemveliso.
Itanki yokuxuba ngokubanzi sisixhobo somoya, kwaye kufuneka siqhutywe ngokungqinelana nemigaqo yokusebenza yezixhobo zomoya.
Kwinkqubo yemveliso eneemfuno eziphakamileyo zococeko (umzekelo kumashishini obisi nakumayeza), ukucocwa kunye nolondolozo lwemihla ngemihla kufuneka lusebenze ngokungqongqo. Nceda ujonge imiyalelo yokusebenza kwesixhobo ukufumana iinkcukacha.
Ukufakwa kunye nokulungiswa kwetrank yokuxuba:
Nceda ujonge ukuba izixhobo zonakaliswe kakhulu okanye zikhubazekile ngexesha lokuhamba, nokuba izinto zokubopha izixhobo azisebenzi.
Nceda usebenzise iibholiti ze-anch zangaphakathi ukufaka izixhobo ngokuthe tye kwisiseko esomeleleyo.
Nceda ufake izixhobo, izixhobo zokulawula umbane kunye nezixhobo ngokuchanekileyo phantsi kolawulo lweengcali. Nceda ujonge: 1). Nokuba umbhobho awuvaliwe na; 2). Nokuba imitha ikwimeko elungileyo; 3). Nokuba imitha ifakwe kakuhle. Phambi kokuba uqalise isixhobo, nceda ujonge isixhobo kunye nokusingqongileyo ukuze ubone ukuba akukho naziphi na izinto okanye abantu abanokuchaphazela ukusebenza kwesixhobo ukunqanda ingozi.
Emva kofakelo, nceda wenze uvavanyo lokubaleka imizuzwana embalwa kuqala, kwaye uqiniseke ukuba akukho sombane sifutshane okanye isandi esingaqhelekanga phambi kovavanyo olufutshane.
Ukuba itanki lokuxuba lixhotyiswe ngesitywina esenziwe ngoomatshini, umyinge ofanelekileyo we-10 # yeoyile yomatshini okanye ioyile yomatshini wokuthunga kufuneka ifakwe ngaphakathi kumatshini wokutywina itywina lokuthambisa ngaphambi kokuba injini enkulu iqale. Amanzi apholisayo kufuneka adluliselwe kwigumbi lokupholisa lesitywina esenziwe ngoomatshini ukwenza isixhobo sokutywina somatshini sithambe kakuhle kwaye sipholile. Kuba itywina loomatshini alilungelelaniswanga kumzi-mveliso, nceda uhlengahlengise itywina elinomatshini kwindawo efanelekileyo ngokuya kwincwadi yokufaka emva kokuba izixhobo zifakiwe, ngaphambi kokuba isebenze ngesiqhelo.
Emva kokuba isixhobo sisebenza ngesiqhelo, nceda ujonge iqondo lobushushu elithweleyo, ukuqhuba ngokugudileyo, ukuqina, njl, nokuba isixhobo sisebenza ngendlela eqhelekileyo. Umsebenzi wokutyisa ungaqhutywa emva kokuqinisekisa ukuba kuyinto eqhelekileyo.
Ukuxuba ukhetho lweetanki:
Izinto eziphambili ekufuneka ziqwalaselwe kukhetho lwetanki lokuxuba: -Iimpawu ezibonakalayo: iipropathi zemichiza, iimeko zomzimba -Iimeko zokusebenza: ubushushu bokusebenza, uxinzelelo lokusebenza -Ubume beemeko zobuchwephesha: iimfuno zokuxuba, iimfuno zenkqubo yolawulo, uyilo lobumbeko loyilo, ukusebenza ngoku iimeko zabathengi Abathengi banokunika iiparameter zokhetho, sinokwenza ngokwezifiso
Ukukhethwa kwesixhobo sokufudumeza okanye sokupholisa
Indawo yokufudumeza amanzi ashushu okanye ioyile, kunye neendlela ezimbini zokufudumeza: ukujikeleza okanye ukufudumeza ngombane ngokuthe ngqo. Ukusasazwa okuphakathi kweoyile eshushu kuthetha ukuba ioyile yokuhambisa ubushushu iyatshiswa kubushushu obuthile kwenye itanki yokufudumeza, emva koko ithuthwe kwaye isasazwe ngempompo yeoyile eshushu. Ukufudumeza ngokuthe ngqo kukufaka ityhubhu yokufudumeza yombane ngqo ebhatyi ukufudumeza ioyile yokuhambisa ubushushu kubushushu obufunekayo. Umjikelo wokupholisa usebenzisa amanzi ukujikeleza ngaphakathi nangaphandle kwebhatyi ukuze loo nto ivelise ukunganyaniseki okanye ukuncamathela kubushushu obuthile. Inokufudunyezwa okanye ipholile ngokongeza iikhoyili kunye nezinye iintlobo ngokweemfuno zomsebenzisi.
(Qaphela: Ngokubanzi, indawo yokufudumeza okanye yokupholisa isetyenziselwa ukwamkela umgaqo wepayipi ephantsi kunye neplagi ephezulu)
Egqithileyo Itheyibhile ye-emulsification ye-single-layer
Okulandelayo: I-316L itanki lokugcina iselfowuni
I-2000L itanki yokuxuba intsimbi engenasici kunye neentloko ze-oval eziphezulu nezisezantsi
Vertical phezulu kunye ezantsi elliptical intloko yokuxuba itanki kunye nohlobo lwesakhelo udushe
I-1000L itanki yokutshisa ngombane
I-1000L yongqimba olunye oluvaliweyo itanki yokuxuba
1000L steel stainless itanki yokuxuba kunye Propelle ...
Itanki lokuCoca ngokucoceka
Udonga olukrwela itanki yokuvuselela i-emulsification